Ziyadloba izibhelu zaseSwazini - Ilanga News
Home Izindaba Ziyadloba izibhelu zaseSwazini
Ziyadloba izibhelu zaseSwazini
ZIFAKAZELE isisho sesiZulu esithi “indlala ibanga ulaka” izidubedube eziqubuke eSwazini kusukela ngesonto eledlule, njengoba abaholi bezinhlangano zakhona bethi lukhulu usizi lwenhlupheko olu-khungethe izakhamizi zakuleliya lizwe ngisho zilenga amajazi emfu-ndo, kodwa wumndeni wasebukhosini kuphela onothile.
Kusukela ngeledlule, kalukho uzinzo kuleliya lizwe njengoba ku-nemibhikisho ehambisana noku-cekelwa phansi kwamabhizinisi – iningi lawo okungawaseNingizimu Afrika – okwaziwayo ukuthi iNgwenyama Makhosetive Mswati III (osesithombeni), inamasheya kuwona.
Amaloli namabhasi kuthunge-lwa ngomlilo. Abantu abahamba phambili kule mibhikisho yintsha ethi seyikhathele wuhulumeni ka-Mswati III ngoba uzicebisa wona, umndeni wakhe nezihlobo.
NgoMsombuluko kunqunywe ukuba kuvalwe yonke imingcele engenela kuleliya lizwe.
Kuvalwe iGolela ephumela em-gwaqweni uN2, kwabasuke beliba-ngise eThekwini, kwavalwa kuMahamba, okuyisango lokuphumela esifundazweni iMpumalanga, yi-Oshukhi esetshenziswa ngabasuke beya eGoli, nekaLomahasha okuwumngcele ohlukanisa iSwazini neMozambique.
NgoLwesibili bekuvalwe yonke into ezweni, ngisho i-internet imbala ukuze kugwemeke ukuxhumana kwabantu. Izimoto bezimi ujenga emagaraji, abantu bezama ukufa-ka uphethiloli ngoba benovalo ngenhlekelele engase isuke.
ILANGA lithole ukuthi le mibhi-kisho iqalwe ezikhungweni zemfu-ndo ephakeme, yesekwa yinhla-ngano emele abafundi, iSwaziland National Union of Students, ye-dlulela ezinhlanganweni zezisebe-nzi zomphakathi ezingaphansi kweTrade Unions Congress of Swaziland, okubalwa kuzona ezo-thisha nezabahlengikazi. Bonke basho ngazwi linye, bathi isibami emphinjeni eyokubukela inkosi eyisicebi iphila impilo ephezulu kodwa abantu bayo bebulawa yindlala.
Ekhuluma neLANGA, uMnu Sibusiso Mdziniso ongomunye wababhikishi, uthe banqume ukususa lolu dungunyane ngoba sebebonile ukuthi akekho oyobuye alilungise leli lizwe ngaphandle kwabo.
“Kusukela ngo-1968 leli zwe lathola inkululeko kodwa namanje abantu bayafa, babulawa yizifo ezelaphekayo. Iningi lethu lifundile kodwa kali-sebenzi ndawo. Imfundo iyabiza lapha eSwazini, uma kwenzekile wayofunda kwelinye izwe kawube usaqashwa kuleli lizwe.
“Okufike kusibulale kakhulu wukuthi kuyona yonke into kuthiwa kufanele kubhekelwe ‘bantfwana benkhosi’.
Ngikhulu-ma nje, zo-nke izingane zabantwana benkosi zihlala ema-zweni aphe-sheya. Impilo ye-ngane ka-Mswati III ngayinye ungayifa-nisa nempilo kangqongqo-she waseNi-ngizimu-Afrika.
“Okunye okusizwisa ubuhlungu wukuthi omunye wabantwana beNkosi Mswati III uholela uku-ba ngungqo-ngqoshe wezokuxhumana kuleli laseSwazini, aholele uku-ba yiphoyisa lesizwe, aho-lele ukuba sethimbeni eleluleka indlunkulu ngezomthe-tho aphinde aholele ukuthi ungu-mntwana wenkosi. Konke lokhu kuwukusibu-kela phansi siyintsha.
“Sizitshe-lile-ke ukuthi kulungile noma singafa ngoba vele akuhlu-kene noku-thi sifile kulo hulumeni osiphe-the. Sifuna kuhlakazwe iphalame-nde ngoku-shesha uku-ze sizozikhe-thela undunankulu we-zwe, hhayi lona ovele akhonjwe ngekhanda yiNkosi Mswati III.
“Sifuna esizomkhe-tha ngevoti futhi sifuna ukuba nezwi kuzona zonke izinto ezithinta umnotho wethu,” kusho uMnu Mdziniso. ILANGA lixhuma-ne noMnu Thulani Kunene ongunobhala-jikelele weCommunist Party of Swaziland, othe sekuyi-sikhathi sokuba kuqinisekiswe ukuthi leliya lizwe liyakhululeka.
Uthe abantu baseSwazini sebe-hlazeke kakhulu kwamanye ama-zwe ngenxa yezinto ezenziwa wu-hulumeni wakhona.
“Sineminyaka ewu-10 sifundisa abantu ipolitiki, izwe lethu linezifundiswa eziningi okumanje zibu-lawa yindlala emakhaya, kodwa kunomndeni owodwa nje oyizigwi-li.
“Kunamuhla izingane zakhona zikhuluma ukwedelela, zithi le mibhikisho yentsha iwubuphukuphuku.
“Ngenxa yenhlupheko, abanye abantu balapha eSwazini bathe-ngisa ngomzimba eGoli naseThe-kwini ukuze bakhulise izingane zabo. Ngikhuluma nje, kunabantu abafa usuku nosuku lapha ka-Ngwane bebulawa wukhwantalala lokweswela.
“Ezibhedlela bathatha amaphilisi okufike kube nzima ukuba ba-waphuze ngoba afike abayabule eziswini ngenxa yendlala. Sifuna kuhlakazwe ngokushesha iphala-mende, abantu bazikhethele uhulumeni abawufunayo, ubukhosi buqhubeke nezinhlelo zabo ngaphandle njengoba kwakweluleke amaNgisi ekuqaleni.
“Phela ngo-1968 zazikhona izi-nhlangano zezepolitiki kodwa za-buye zavalwa imilomo ngo-1973 yibo lobu bukhosi ngoba bufuna ukwenza intando yabo.
“Ngeke iphele le mibhikisho li-ngakahlakazwa leli phalamende ukuze kuzongena uhulumeni we-ntando yeningi.
“Ngokomhlaba nomnotho esinawo lapha eSwazini, singakwazi ukubhekana nezinkinga esinazo. Singakwazi ukuvala leli gebe lokuthi abasondelene nendlunkulu baphile impilo ka-E40 000 (R40 000) ngenyanga kodwa kube kuna-bantu abasasebenza bahole u-E700 (R700) ngenyanga,” kusho uMnu Kunene.
UMnu Lucky Lukhele okhulumela iSwaziland Solidarity Network (SSN), uthe ithemba labo balibeke nasemazweni angoma-khelwane beSwazini, okuyiMoza-mbique neNingizimu-Afrika. Uthe bethemba ukuthi la mazwe azo-ngenelela ngokushesha.
“Akukhona ukuthi ngabantu abaqale udlame, intsha izwakalise imizwa yayo kwaqala wona amaphoyisa aphendula ngesihluku. Ngikhuluma nje kukhona oshonile abanye basezibhedlela.
“Iningi lentsha liqedile ezikoleni kodwa imisebenzi kayikho. Siyacela kubaholi bamazwe angomakhelwane ukuba bangenelele, ikakhulukazi iNingi-zimu-Afrika njengoba iningi la-mabhizinisi ashile kungawakhona.
Ukungenelela kwayo ngokushesha kuzosiza nayo ngokuthi ingazi-tholi isibhekana nomthwalo onzima wokuba nabantu abaningi aba-phuma emazweni angomakhelwa-ne, okungagcina ngokuthi abantu bayo bangatholi lutho oluvela kuhulumeni wabo,” kusho uMnu Lukhele.
Previous articleIChiefs engcupheni yokushiywa yisibabuli
Next articleIshayekile iRBM ngenxa yodungunyane